Isbadalka dhaqaale iyo maalgashiga ku wajahan Africa • Horseed Media
You are here: Home / Business / Local businesses / Isbadalka dhaqaale iyo maalgashiga ku wajahan Africa
Sanadihii ugu dambeeyay ayaa si weyn loo dareemayey in wadamada reer galbeedka iyo dowladaha Asia sida China iyo India in ay aad xooga u saarayaan tartan xoog lehna ugu jiraan sidii ay u hanan lahaayeen heshiisyo ganacsi.
Heshiisyadaas ayaa ah kuwo ka dhexeeya shirkadaha waaweyn iyo kuwa dowliga ah intaba. Isku celcelis dhaqaalaha Africa waxa uu korayaa GDP 4.7% halak Yurub uu korayo GDP 0.1% . Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa in ay tahay GDP 2.6%.
GDP. waxaa uu ka turjumaa wax soosaarka wadanka waana halbeega lagu cabiro marxalada dhaqaale ee wadan kasta.
Dalka Soomaaliya oo dhaca bariga Africa waa dal hodan ah, oo leh wax soo saar tiro badan iyo khaayraad dabiici ah islamarkaana ah dihin ah.
Mr. Dude and Ambassador Ajongo of South Sudan
Haddii ay Somalia noqoto daneynta maalgashi ee dunidu ka rajo qabto waxaa ugu horeeya dalka Soomaaliya oo lagu tiriyo dal colaado iyo fowdo ay la degeen, balse kamida wadamada ugu kheyraadka badan aduunka.
Agaasimaha Somali Economic Forum Mr. Hassan Musa Dudde ayaa ka mid ahaa marti sharaftii lagu martiqaaday shirkan looga haddlayay dhaqaalaha iyo technologiyada ha ahaato Telecom iyo kuwo kaleba oo ka dhacay magaalada London, kulankan oo uu Xasan Muuse u metelayey dalka Somalia wuxuu ka jeediyey khubad taabanaysay arrimo badan oo ku saabsan dhaqaalaha, khayaraadka iyo waliba isbedelada siyaasadeed ee dhowaan ka dhacay Somalia.
Agaasimaha ayaa Halkaas kulamo gaar gaar ah kula qaatay wufuudii iyo safiiradii dalalka shisheeye ee caalamiga ahayad ee shirkan kasoo qayb galay, kulmadan oo ay goob joog ka ahaayeen mas’uuliyiin sar-sare oo isugu jira midowga Yurub iyo African intaba.
Mr. Hassan Musa Dudde ayaa carabka ku dhuftay muhiimada ay maalgalintu leedahay iyo dowrka ay ka ciyaarto shaqa abuurista dadka Africa, dalka Soomliyana ay uu ugu yeerayo in dunido isha ku hayaan, investmetina ku samaystaan mustaqbalka dhow.
Mr. Dude ayaa intaasi ku daray, in maanta Soomaalida iyo Soomaaliyaba ay isku diyaarinayaan sidii si wadajir ah looga faa’iideysan lahaa isbadalkan cusub.
Wufuudii kulankan weynahan ka qayb gashay waxay Somalia ku tilmaameen dal hodan ah, islamarkaana ay filayaan in ay mustaqbalka dhow hormuud u noqoto maalgashiga iyo koboca dhaqaale ee sida xowliga ah looga dareemayo qaarada Africa.
Kulankan oo ay soo xaadireen wufuud tiro badan oo ka kala socotay in ka badan 22 dal, waxaa sidoo kale lagu soo casumay ururo caalami ah iyo shirkado shisheeye oo daneeya arrimaha horumarinta Africa.
Waxaa kaloo shirkan kasoo qayb galay madax ay kamid yihiin safiirada dalalka Africa u fadhiya dalkan Britain, sida safiirada dalalka South Sudan, South Africa, Uganda iyo qaar kale.